Teo am-panoloana kodiarana: notafihin’ny dahalo ilay fiara mpitondra entana | NewsMada
Teo am-panoloana kodiarana: notafihin’ny dahalo ilay fiara mpitondra entana
Mandrovi-tsihy ny olon-dratsy. Fiarabe mpitondra entana indray lasibatry ny asan-dahalo ny alin’ny talata hifoha alarobia teo tsy lavitry ny tanànan’i Malaimbandy. Vaky kodiarana ny fiara ka nohararaotin’ny jiolahy.
Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Fiarabe mpitati-bokatra iray tra-doza teo am-pidirana teny amin’ny lalam-pirenena faha- 34, lalana mampitohy an’i Malaimbandy sy Antsirabe, ny talata alina teo tokony ho tamin’ny 09 ora. Voatafik’ireo andian-dahalo enin-dahy nirongo basy ny fiara. Araka ny fantatra, vaky kodiarana teo amin’ny 10km tsy hidirana ny tanànan’i Malaimbandy ny fiara. Vokany, nidina nijery sy nanolo izany ireo telo lahy tao anatiny. Teo am-panoloana izany indrindra, injay nisy dahalo enin-dahy nirongo basy hanao ny asa ratsiny. “Nitaky vola ireo olon-dratsy. Namaly anefa izy telo lahy fa tsy manam-bola”, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Tsy nahafa-po ireo dahalo ny valin-teny, antony saika hamonoan’ireo mpanafika azy telo lahy. Manoloana izany, vaky nandositra ireo mpanolo kodiarana. Naratra voatoraky ny pilotra kosa ny iray tamin’izy telo lahy.
Taorian’izay, niditra tao anatin’ilay fiarabe ireo dahalo nisavasava. Lasany tamin’izany ny sakaosy nisy ny lamba rehetra. Mbola notsindrontsindromin’izy ireo tamin’ny lefona koa ireo gony maro nisy ny voamaina, ny tsiasisa rehetra. Tsy vitan’izay fa mbola nopotehiny ihany koa ny fitaratry ny fiarabe mialoha ny nialany. Nandritra izay, namonjy ny sefom-pokontanin’i Malaimbandy ireo telo lahy voatafika. Nampahafantatra ny tranga tamin’ireo zandary sy ny ben’ny Tanàna ihany koa. Raha ny tsilian-tsofina, olona avy eto anivontany ny iray tamin’ireo mpanafika, raha ny feony sy ny firesany.